Fitokonana tampoka – Mosary tsy afaka dia handray fifaninanana afrikana no mahamaika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Mey 2019 4:07 GMT
Zimbaboe: -Nanao fihetsiketsehana tampoka tany amin'ireo tanàna lehibe tao Zimbabwe tamin'ny Sabotsy ny firaisan'ny vondrona sivika mpanohitra, ny Antenimieram-pirenen'ny Lalàmpanorenena (NCA amin'ny teny Anglisy). Mitatitra ny This is Zimbabwe, bilaogy nomanin'ny vondrona mpanao fihetsiketsehana Sokwanele/Zvakwana fa olona 18 no nosamborin'ny polisy maherisetran'i Zimbaboe, izay tsy nampoizina tamin'ny fihetsiketsehana.
” Olona 18 no nosamborin'ny mpitandro filaminana tamin'ny hetsi-panoherana [ny asabotsy],. Hiatrika fiampangana ho nandika ny Lalànan'ny Fiarovana sy ny Filaminam-bahoaka (POSA amin'ny teny Anglisy) izy rehetra ireo. Voaràra ao Zimbaboe ny mivorivory misy olona telo na mihoatra mba hiresahana politika na hanao fihetsiketseham-bahoaka tsy misy fahazoan-dalana avy amin'ny polisy.
Samy manahy ny amin'ny mety ho fihetsiketsehana goavana kokoa nokarakarain'ny Kongresin'ny sendikan'ny Varotra ao Zimbaboe (ZCTU amin'ny teny anglisy) androany i This is Zimbabwe sy Zimpundit.
“Talata, mikasa hiantso ireo mpikambana 300.000 ao aminy hidina eny an-dalambe ny Kongresin'ny sendikan'ny Varotra ao Zimbaboe (ZCTU) noho ilay antsoiny hoe fanapahana ny fifampiresahana amin'ny governemanta,”
Hoy i Zimpundit nanoratra
Manamarika i FirePussy fa mety tsy hisy “fipoahana” ao Harare, tsy misy rano nandritra ny herinandro mahery ny olona any amin'ny faritra sasany faran'izay mahantra indrindra ao an-tanàna. Mampalahelo hoy izy fa nanome tolotra tamin'ny fifaninanana hampiantrano ny Tompondakan'i Afrika amin'ny taona 2010 ny firenena, fanapahan-kevitra izay handanian'ny firenena vola amina miliara dolara.
“Nahatsikaritra vehivavy maromaro niandry “horaisina” teo amin'ny Lalambe Enterprise Road sy Arcturus aho. Ny nahasarika ny masoko dia samy nanana fitoeran-drano plastika 5 litatra teo an-tongony ireo vehivavy tsirairay. Angamba ho any Mabvuku/Tafara, faribohitra be mponina, izay fantatra amin'ny anarana hoe tanàna sambo, atsinanan'i Harare izy ireo. Tsy nanana rano nandritra ny herinandro lasa ity faritra be mponina ity.
Saingy vao haingana ny fikambanana nasionalin'ny baolina kitra nasionaly no nanolotra fangatahana hampiantrano ny Tompondakan'i Afrika 2010. Tsy miraharaha ny zava-misy fa tsy afaka manome rano fisotro madio ho an'ny mponina ao an-tanàn-dehibe ny fotodrafitrasa simba (ary tafiditra amin'izany ny governemanta).
RDC: – Nanamarika i Congogirl fa vonona hirotsaka hofidiana filoham-pirenena ny iray amin'ireo olom-pirenena tsara orina indrindra ao amin'ny firenena. Toa vonona hiala amin'ny fiainany raitra ho an'ny asa goavana amin'ny fanarenana ny fireneny ravan'ny ady i Oscar Kishala, tale momba ny homamiadana ao amin'ny Millennium Pharmaceuticals ao Cambridge.
Malawi: – Mike ao amin'ny Hacktivate manasongadina ny tsy fahaizan'ny MSM manome fomba fijery feno amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Gaga tamin'ny lahatsoratra iray tao amin'ny New York Times izay mifantoka amin'ny fandripahana ala izy kanefa tsy miraharaha ny hanoanana izay manery ny olona hanao asa fitrandrahana ala;
“Mahagaga fa tsy misy filazana na dia iray aza momba ny mosary, fa angamba zavatra tsara izany, satria leo ny vahoaka rehefa maheno momba ny” mosary hafa any Afrika”. Fa kosa miresaka momba ny fahaverezan'ny ala ao Malawi, sy ny fomba ahafahan'ireo mpitrandraka ala mivelona amin'ny asany mampalahelo
Manana tatitra mahaliana momba ireo fanavaozana vaovao izay ahitana trandraka mahavariana amin'ny fomba fiainan'ny Afrikana an-tapitrisany izy. Voalohany, i “hipporoller” izay manatsotra ny fitaterana rano amin'ny lalana lavitra – zava-misy mandreraka any Afrika.
Ny faharoa dia i Amazon ao amin'ny Mechanical Turk izay mandoa vola ho an'ny olona manao asa tsotra tsy vitan'ny solosaina
Vakio ny adihevitr'i Ethan Zuckerman momba izany